Misika yose yekristpasi pasi rese ine nhasi yashanduriro yemari uye yekutengesa ivhu.
Abucoins crypto misika
BHEX crypto misika
BITBOX crypto misika
BITKER crypto misika
BTSE crypto misika
BW crypto misika
BaseFEX crypto misika
Binance.KR crypto misika
BitFlip crypto misika
BitMEX crypto misika
BiteBTC crypto misika
Bitpanda Global Exchange crypto misika
Bitsane crypto misika
BtcTrade.im crypto misika
Buda crypto misika
Bybit crypto misika
Bytex crypto misika
CEX crypto misika
CODEX Exchange crypto misika
Chaince crypto misika
CoinEx Market crypto misika
Coinhouse crypto misika
Coinrail crypto misika
CredoEx crypto misika
Cryptohub crypto misika
cfinex crypto misika
DOBI trade crypto misika
Deribit crypto misika
EN crypto misika
EtherDelta crypto misika
ExtStock crypto misika
FCoin crypto misika
fex crypto misika
GBX Digital Asset Exchange crypto misika
Huobi crypto misika
Huobi (HBUS) crypto misika
Instant Bitex crypto misika
Koineks crypto misika
MBAex crypto misika
OKCoin crypto misika
Octaex crypto misika
OpenLedger DEX crypto misika
Phemex crypto misika
QBTC crypto misika
Qryptos crypto misika
Quoine crypto misika
STEX crypto misika
Stellarport crypto misika
TAGZ Exchange crypto misika
TDAX crypto misika
TRX Market crypto misika
Tokocrypto crypto misika
Trade Satoshi crypto misika
WEX crypto misika
Waves Decentralized Exchange crypto misika
xBTCe crypto misika
55 Global Markets crypto misika
Misika ye Digital mari ndeyekutsinhana kwekutengeserana kwema digital mari kana mari yemadhora. Misika ye Crystal inowanzo ita nyanzvi mu digital mari, kunyange ivo vachigona zvakare kutengeserana mumakambani makuru emari.
Digital mari exchanges inotengeswa vaviri vaviri: crypto kune crypto kana crypto kune yakajairika mari. Kuti uone mutengo wekutenga / kutengesa wega wega wekutengeserana, mutengo wekuchinjana unoshandurwa mumadhora.
Crypto exchanges ine hunhu hukuru:
Mari ye mari yemadhora
Mari yakawandisa yemari
Mari yakawandisa yekutengesa pairi
Digital mari kuchinjanisa kutengeserana vhoriyamu - iyo yakazara huwandu mumadhora ezviitiko zvese zvekutengesa vaviri vaviri pane imwe nguva. Sezvo mutemo, huwandu hwekutengeserana hwekristin exchanges hunofungidzirwa pazuva.
Kuwanda kwemakristcheni mumisika yemakristani kushambadzira ndiko huwandu hwakazara hwemakristani akasiyana akambotengeswa pane uku kuchinja munguva pfupi yapfuura. Kuwanda kwemakristcheni emari yeiyo digital mari exchange inoratidzira huwandu hwayo hwekutengesa zvakananga neako digital mari, huwandu hwevanogona kutenga uye vatengesi pane ino crypto exchange.
Mari yemari - yakazara mhando dzemakadhinari emari ayo imwe neimwe crypto pamusika uyu we cryptocur lwemari inotengeswa kana kutengwa. Sezvo mutemo, mari yemadhora inotengeswa mumadhora.
Kuwanda kwekutengeserana joiri kweiyo crypto-exchange ndiko kuwanda kwezvinhu zvakakwaniswa kutengeswa pane ino crypto-musika pazuva. Yakakura huwandu hwevatengesi vekutengesa, iyo inonyanya kushambadzira kutengeserana kunoitika, vatengi vanowedzera, vatengesi vekristin pane uku kuchinjana.
Pa cryptoratesxe.com, isu tinoteedzera ese anoshanda eiyo crypto exchanges ari munyika uye tinoratidza iwo chiyero cheizvi maitiro.
Isu tinopawo ruzivo rwakadzama pamusika wega wega wemahara nemahara.
Cryptocur lwemari yekutengesa inounzwa kune yega yega digital mari:
Cryptocur Mari yekutengesa huwandu.
Iyo yakanakisa kutenga kwemari yekutengesa pamusika we digital mari.
Wakanakisa mutengo wekutengesa digital mari paiyo digital mari exchanges.
Cryptocur lwemari Chiyero
Iyo crypto-exchange rate inoratidzwa pawebsite yemahara online.
Chiyero chekushambadzira kwemari ye crypto chinogona kutariswa maererano nehunhu hwakasiyana:
Kuwanda kwemakristchera /
Kuwanda kwekutengeserana mapareji
Isu tinokuratidza iwe crypto-exchange rate tafura yekurongedza iyo nekutengesa vhoriyamu.
Isu tinotenda kuti hukuru hwehuwandu hwekutengesa, hwepamusoro muyero wemusika we crypto.
Kunyangwe iyo chiyero chekutsinhana kwe crypto inogona kuverengerwa zvese nehuwandu hwehuwandu hwekutengesa mairi uye huwandu hwemakristokiti akatengeswa.
Digital mari inotsinhana mu 2022 - iyo tafura yepamhepo pairi Cryptoratesxe.com webhusaiti yekushambadzira uko kunoitisa kushambadzira kweiyo digital mari mu 2022.
Crypto inotsinhanha 2022 - sevhisi ine ruzivo rwekuziva ruzivo kubva kune dzese dziripo shanduko munyika.
Isu tinogara tichigadzirisa ruzivo pamusoro peiyo digital mari kuchinjanisa kwe 2022, isu tine runyorwa uye zviyero zvekutsinhana kwe digital mari kwe 2021, uye isu tinovimba kuti tichava chiyero cheiyo digital mari kuchinjanisa kwe 2023.
Tarisa inoshandurwa kwemari yekutengesa crypto mu 2022 pane yedu webhusaiti.
Yakanakisa yekushambadzira kwemisika, misika yepamusoro digital mari.
Yakanakisa yekuchinjana kwemariji munyika, yepamusoro misika ye crypto - mune yedu sevhisi pamhepo uye mahara.
Itafura yeiyo yakanakisa yekushambadzira kweiyo crypto inoratidzwa pane ino peji, yakarongedzwa nehuwandu hwekutengesa.
TOP 20 yakanakisa misika ye digital mari maererano nehuwandu hwekutengesa inoonekwa nesu online, zuva nezuva nekutenderedza wachi.
Yakanakisa crypto exchanges yanhasi , misika yepamusoro ye5 crypto:
TAGZ-Exchange crypto misika
Binance-KR crypto misika
55-Global-Markets crypto misika
DOBI-Trade crypto misika
Iyo yepamusoro yekushambadzira kwakanyanya digital mari inogona zvakare kuverengerwa nehuwandu hwe mari yemadhora uye huwandu hwekutengesa vaviri vaviri pane kuchinjanisa kwega kwega.